Tetikasa avy Dino Cattaneo
fanontaniana Tetikasa avy Dino Cattaneo
1 taona 11 volana lasa izay - 1 taona 11 volana lasa izay #393 by Colonelwing
Tsara ny andro Gentelmen,
Ho anareo (Fast mover Jockey, s) izay mankasitraka fiaramanidina mpiady eo amin'ny tena fiainana,
Eto no nisy no itokiako amin'ny taona maro ho Mandehana mba maka tahaka ny sasany
ny tena fiainana miaramila mpiady USA ihany amin'ny andro ankehitriny izao ...
LOCKHEED MARTIN F-35 helatra II
Izany Gentelman Dino anarana Cattaneo dia iray amin'ireo olona tsara indrindra misy mba hahatonga ny
tena zavatra ho tena manidina milina in Simulators ny amin'izao fotoana izao ho an'ny FREE.
Andramo izany ho fiovana & Mandehana izany.
Manana lehibe mitondra ny andro fandrika Gentelmen ...
Flight Simulation tetikasa amin'ny Dino Cattaneo. Current an-trano ho any amin'ny T-45C Goshawk, F-14D Tomcat, S-3B Viking sy F-35 Lightning II tetikasa ho an'ny Flight simulator X: haingana sy Prepar3D v3.0. Koa: hevitra, hevitra sy hitany momba ny fialam-boly sy ny fiaramanidina sidina simulation lalao.
Last edit: 1 taona 11 volana lasa izay Colonelwing.
1 taona 11 volana lasa izay #395 by superskullmaster
Eny ahy ary izy no niresaka indray, ary nivoaka ny sasany fiovana nataoko tamin'ny F-35 ho ambony realism. Payware toetra azo antoka.
1 taona 11 volana lasa izay - 1 taona 11 volana lasa izay #402 by Colonelwing
Tsara ny andro superskullmaster ,,,
Foana mankafy ny 35B VTOL ny alina Carrier fipetrahana ho an'ny logbook ...
1 taona 11 volana lasa izay #410 by Gh0stRider203
Tia ny Tomcat
1 taona 11 volana lasa izay #414 by Colonelwing
I have'nt manamarina mitaingina ny TOM ,,
fa raha ny tahaka ny F35 sy ny T45 ,, tsara izy ireo atao ho azo antoka.
1 taona 11 volana lasa izay #422 by Gh0stRider203
Mpiady ihany ve aho tena fiaramanidina dia ny Tomcat LOL
1 taona 11 volana lasa izay #425 by Colonelwing
Ve ato aminareo misy mitondra fandrika traikefa ... Just mangataka ...
1 taona 11 volana lasa izay #427 by Gh0stRider203
Izany dia midika hoe efa elaela aho LOL tena mifaninana ka tsy manana fotoana be ho an'ny ara-barotra na inona na inona any an-dafin'ny LOL
KOA dia tsy manampy aho, tsy manana tapa-kazo sy ny throttle. I mampiasa ny fitendry ho an'ny ankamaroan'ny zava-drehetra. I fiarakaretsaka hanala sy ny tany mampiasa ny fomba Playstation maso izany nahazo USB connector LOL
1 taona 11 volana lasa izay #430 by Colonelwing
Thats lalana ,,, raha mbola tianao fa ny fomba hanaovana ,, ny zavatra tsara!
Fotoana mamorona pejy: 0.270 segondra